Muran Ka Taagan Xil Ka Qaadistii Lagu Sameeyay Wasiirkii Maaliyadda Hirshabelle – Goobjoog News
Xildhibaan Maxamed Cadow oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka maamulka Hirshabelle ayaa kahor yimid xil ka qaadis uu maalintii shalay ahayd madaxweynaha maamulkaasi ku sameeyay wasiirkii maaliyadda ee maamulkaasi.
Waxa uu sheegay xildhibaanka in madaxweyne cosoble uu jebiyey heshiis Todobaadkii hore ay xildhibaannada iyo isaga ku gaareen magaalada Jowhar kaasi oo ahaa mooshinkii ay wadeen xildhibaannada in la joojiyo iyo sidoo kale in madaxweynaha aanu isbedal ku sameyn golahiisa wasiirada muddo Saddex Bil ah.
“Madaxweynaha waxa uu jebiyey heshiis aan la galnay haddii aan nahay xildhibaannadii mooshinka ka keenay isaga, ballantu waxay ahayd inaanu madaxweynaha sameyn isku shaandheyn ama xil ka qaadis wasiirada ah iyo sidoo kale annaguna inaan la laabanno mooshinka” ayuu yiri xildhibaanka.
Dhanka kale xildhibaan Cadow ayaa sheegay in madaxweyne Cosoble uu kaligiis isku koobay awooddii maamulka, shaqo aan socon, muddo 9 bil ahna aan la qaban shaqo muuqata.
“Madaxweynaha wuxuu iloobay inuu cod ku yimid, wuxuu jebiyey heshiiskii la gaaray, waxa uu maroorsaday awooddii maamulka, kali talis ayuu noqday, arrintiisana baarlamaanka ayaa go’aan ka gaari doona” ayuu hadalkiisa raaciyey xildhibaanka.
Madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi cosob ayaa xil ka qaadis ku sameeyey shalay, wasiirkii maaliyadda maamulkaasi Maxamed Maxamuud Cabdulle, waxaana xilkaasi loo magacaabay Zaki Cabdi Xaraare.
Dambi Lagu Helay 3 Qof Oo Soomaali Maraykan Ah
Nzddik xlibwj Viagra overnight delivery cialis generic name
Ojdhze qorwfh Overnight cialis buying cialis cheap
Elfxxd eagngs Buy now viagra cialis daily cost
Mlavvo lmfjqy 50mg viagra when will cialis go generic
speedy cash payday loans online payday loans direct lenders...
where can buy viagra 150 mg generic viagra sildenafil online...
cheap sildenafil buy sildenafil...
viagra austrailia buy viagra in the united stater online buy...
is caverta the same as viagra viagra how long before it work...